भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विवाद अन्ततः समाधानतिर – RealPati.com
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विवाद अन्ततः समाधानतिर
कठमाडौं । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल प्रशासनको लामो समयको विवाद अन्ततः समाधानको दिशातर्फ गएको छ ।
नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको नेतृत्वमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेर पुरानो सञ्चालन समिति भंग गरेपछि कानुनी विवाद देखिँदै आएको थियो । नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित उक्त अस्पतालको व्यवस्थापन समितिलाई जबर्जस्ती नगरपालिकाले कब्जा गरेपछि पुरानो कार्य समिति सर्वोच्च गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ १० गते नगरपालिकाको हस्तक्षेप असंवैधानिक भएको भन्दै पुरानो कार्य समितिलाई व्यवस्थापन सम्हाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछिलाई पनि नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
कावा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठकले कात्तिक २४ गतेबाट रिक्त रहेको अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा सोही अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ एनेस्थीसिया डा.दिपेश धिताललाई नियुक्त गरेको छ भने कार्यकारी अधिकृतमा भक्तपुरकै रुपेश शिल्पकारलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी रिक्त डेपुटी डाइरेक्टरहरुमा बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अजय झा र वरिष्ठ अंको सर्जन डा. उत्सवमान श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
नयाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले आजै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको उपस्थितिमा पदबहाली गरेसँगै लामो समय भक्तपुर नगरपालिकाको कब्जामा रहेको अस्पताल संस्थाको जिम्मामा आएको हो ।
सञ्चालक समितिको बैठकले मेडिकल अफिसरहरुबीच रहेको असमान तलबमानलाई पनि समायोजन गर्ने निर्णयसँगै एक दर्जन चिकित्सकहरु लाभान्वित भएका छन् ।
अस्पतालबाट प्रमको सन्देश : आपसी सद्भाव खलबल्याउने कार्य मान्य हुँदैन
ट्रम्पको प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न किन अस्वीकार गरियो ? यस्ता रहेछन् कारण